Ezamaqembu: Inselelo kuMaimane neDA zibekwa amadaka – Bayede News
Ezamaqembu: Inselelo kuMaimane neDA zibekwa amadaka
Emuva kokuhlehlelwa zikhuni ngokhetho lukazwelonke
UMnu uMmusi Maimane. Isithombe: Gallo Images / ngu-Alon Skuy
Emuva kokuhlehlelwa zikhuni ngokhetho lukazwelonke abe-Economic Freedom Fighters bacijisa imikhonto
Abaholi abathathu beDemocratic Alliance (DA) banesizathu sokuzishaya isifuba ngokuthile okwenzeke eqenjini ngesikhathi sabo. Laba ngoMnu u-Anthony James Leon owaba ngumholi waleli qembu kusuka ngonyaka we-1999 kuya kowezi-2007.
ULeon wathatha leli qembu liphansi ngokwamalungu emuva kokhetho lokuqala kuleli ngaphansi kwedemokhrasi. Wayisusa ekubeni yiDemocratic Party (DP) yaba yiDA. Omunye nguNkk u-Otta Helen Maree, owaziwa ngelikaHelen Zille nowaba ngumholi noNdunnkulu waseWestern Cape kusuka ngowe-1999 kuya kowezi-2007. Lo mholi angazishaya isifuba ngokuheha intsha yaboHlanga ukuba ibe ngamalungu eqembu. Umholi wesithathu nguMnu uMmusi Aloysias Maimane nowaba ngowokuqala woHlanga ukuhola leli qembu kusuka ngonyaka wezi-2015. Ngaphansi koholo lwakhe leli qembu lidle omasipala abakhulu kuleli okuyiJohannesburg, iTshwane kanye neNelson Mandela Bay. Lo mlando walaba baholi ubukeka usengcupheni njengoba ipolitiki yakuleli ibukeka iguquka.
Okhethweni lwakamuva lukazwelonke leli qembu lehlulekile ukwenza njengoba labe lethembisile futhi lifisa. Lesi simo sifake ingcindezi kumholi walo uMaimane novele kwabanye njenge “sehluleki”. Akuphelanga zinyanga zingaki kube nokhetho kwaphinde kwamehlela ngesikhathi elinye iqembu eliphikisayo nelivota neDA kwabanye omasipala i-Economic Freedom Fighters (EFF) limemezela ukuthi ngeke lisavota naleli qembu. Nakho lokhu bekulandela isexwayiso se-EFF ukuthi inesifiso sokuthatha esobumeya eTswane.
Ngokusho kwalowo okhulumela iDA uMnu uSolly Malatsi uthe konke lokhukwenzeke ngesikhathi i-EFF iqhamuka nesiphakamiso esibe yindida emuva kwemiphumela yokhetho nayilapho abe-EFF bephakamise ukuthi kufakwe amalungu ayo kwesobumeya eTswane.
Kulokhu uMalatse uthi kubamangazile ngoba kwehlukile esivumelwaneni ababa naso eminyakeni eyedlule. Ngokusho kweDA amalungu ayo asemikhandlwini ethintekayo kanye namanye amaqembu ebambisene nawo kawasibonanga siphusile isiphakamiso se-EFF.
Uma kuwukuthi umlando uyaziphinda lapho kwabonakala khona iDA ilahlekelwa ngesobumeya eNelson Mandela Municipality, amalungu aleli qembu anaso isizathu sokwethuka ekuthini kukhona eminye imikhandlu emincane nemikhulu engahamba.
Lokhu kubukeka kuzokwengeza enye ingcindezi kuDA kepha kakhulu kuMaimane namuhla nangesikhathi sokhetho oluzayo. Kungalesi sizathu leli qembu kulindeleke ukuthi liqale kabusha ukuhlanganisa iqhingasu elizokwenza libuyele endaweni yalo. Omunye angazibuza ukuthi yini leli qembu lishikiliswe yiqembu elinjenge-EFF elinamaphesenti amancane kude le kunalo. Impendulo kulokhu isekutheni okwamanje yi-EFF kuphela esakwazi ukukhuluma inkulumo efinyelela kumalungu nakubalandeli be-African National Congress (ANC) oningi labo kungaboHlanga.
Uma iphawula ePhalamende iyalaleleka kuneDA ngakho belu ukuthi isuke ikhuluma neningi. Ukufaka isehlukaniso neDA kusho khona ukuthi bayivalela ekhoneni bayibuyisela emuva lapho yabe izwakala ikhulumela idlanzana elingabelungu. Lokhu i-EFF ikwenza ngabomu ngoba izidayisa ngelokuthi yiyo (ne-ANC) abalwela aboHlanga. Kuzothi kungachuma lokho bese inyundela uKhongolose okungelula kuwo ukuthi uthi umele aboHlanga bodwa.
Ngokwehlukana nokuvota neDA abe-EFF kabagcinanga ngokugagazisa ubuholi bukaMaimane neqembu lakhe komasipala kepha empeleni sebeqale umkhankaso wokuketula iDA njengeqembu elinamandla koHulumeni Bendawo. Ngakho abazi ipolitiki kuDA kumele bangenami ngesinqumo se-EFF yize okwamanje bezoziqinisa bathi lokhu ngeke kubakhinyabeze nakancane.
Posted in iBayede Kuleli Sonto, Ukuhlaziya